Global Voices teny Malagasy » Japana: Ny atao amin’ireo “Zavakanton’ny Media” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Aogositra 2009 13:46 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika Candy
Ho an’ny firenena mikaroka ny hamadihana ny ‘soft power’ ananany ho toy ny masonkarena [herin'ny rindrankajy ve ity ‘soft power’ ity?], inona no anjara toeran’ny kolontsainan’ny sarimiaina japone sy ny manga ao anatin’ny pôlitikan’ny governemanta? Ny valinteny ofisialy dia hoe ny sarimiaina japone, manga ary zavakanto numérique dia lova sarobidy sy orinasa haingam-pivoatra, mitaky sehatra ofisialy ho an’ny fikajiana sy fanehoana. Raiso ny tetiky ny praiminisitra iray hanova ny sariny amin’ny maha-mpankafy manga  azy ho n'inon'inona, dia hahazo iray isika izay azo antsoina vonjimaika ho “Foibem-pirenena ho an’ny zavakanton'ny Media” .
Tsy hevi-baovao akory ny fananganana ivon-toerana iray hiarovana sy hanehoana ny “zavakanton'ny media” izany, araka ny tenin’ ny Japan Times amintsika. Na izany aza, ity iray ity dia mitondra 11.7 billion JPY nekena tamin’ny tetibola fanampiny FY2009 nolanian'ny governemanta. Taorian'ny niantsoan’ny Antoko Demokratikan’ny Filoha Japone Yukio Hatoyama ny ‘Foibe ho “ café-mpirenena'ny manga” ihany no nanomboka nahasarika ny saina ilay tetikasa. Anime Dream dia manome ny tsipika arahana ara-potoana tanatina fantina avy amin'ireo orinasa mpamokatra sarimiaina japone .
Ao amina lahatsoratra mitondra ny lohateny “Tsisy dikany, mampihomehy “, toy izao no navalin’ny Ampotan :
Aleo hazava ny resaka momba azy ity: Ity tetikasa ity dia fanehoana mibaribary tsara ny tian’ny vahoaka lazaina rehefa miteny izy ireo fa te-hamely tehamaina [te-hanorotoro] ny fitantanan-draharahan'i Kasumigaseki . Mbola ao foana ilay Telozoro vy fanta-daza any Japana. Ny fitantanan-draharaha, ny fanaovan-dalàna ary ny orinasa no tongotra telon’ity telozoro ity, ary nivondrona ho iray izy ireo ho an’ny fanangonan-karenany manokana eo an-damosin’ireo mpandoha hetra. Matetika ny olona no mampifandray ny Telozoro Vy amin’ny tetikasam-bahoaka, toy ireo lalam-pirenena sy tetezana mitondra n’aiza n’aiza, nefa ity tetikasa ity dia maneho fa tsy misy fetrany ny eritreritr'ireo mpitatan-draharaha miaraka amina loharanom-bolam-bahoaka tsy hita fetra azony ampiasaina.
Ilay mpitoraka blaogy hannoumita dia mampitaha ilay Foibe nolazaina  amin’ny Tontolon'ny Olom-baovao , ilay complexe-n'ny fialamboly vaovao momba ny lohahevitra kolontsaina pop japone, ary ny Tahirim-bakoky ny firenena ho an'’ny Tantara an-tsary foronina [ Musée de la Bande Dessinée)  (Comic Strip Museum)any Angoulême.
Matt Alt ao amin'ny AltJapan  dia manoratra momba ny fomba hanoheran’ireo mpampiaina sary japone sasany ny fametrahana fotodrafitrasa lafovidy sy mampitsoaka matanjaka toy izany. Hiroshi Odagiri avy ao Wired Vision  [ja] dia miteny fa ny fambolena ny zavakanto ho toy ny kolontsaina, sy fialamboly ho an’ny vahoaka toy ny orinasa dia zavatra roa samihafa.
Syou Hayama ao amin'ny “Otaku Products Laboratory plus ” dia nanoratra valiny ho an’ny antsom-bahoaka momba ny hevitry ny masoivohon’ny raharaha ara-kolontsaina  [ja], ary mandroso hevitra ny hampidirana ho ao amin'ilay Foibe ireo tantara rehetra tamin'ny haino aman-jery novokarina tany Japana.
Ilay mpitoraka blaogy mojix  dia miray hevitra amin’ilay Profesora ao amin’ny Anjerimanontolon’i Tokyo Yasuki Hamano fa “ho fananana tsara ho an’ny firenena ilay Foibe afaka zato taona” nefa dia nandroso fa:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/08/30/3233/
 mpankafy manga: http://www.cartoonleap.com/2009/04/09/pm-taro-aso-manga-and-anime-will-save-japan-from-recession/
 fantina avy amin'ireo orinasa mpamokatra sarimiaina japone: http://www.animedream.com/ad/news/view/2658
 Tsisy dikany, mampihomehy: http://ampontan.wordpress.com/2009/07/01/so-pointless-its-comical/
 fitantanan-draharahan'i Kasumigaseki: http://en.wikipedia.org/wiki/Kasumigaseki
 mampitaha ilay Foibe nolazaina: http://hannoumita.seesaa.net/article/126261340.html
 Tontolon'ny Olom-baovao: http://www.newpeopleworld.com/
 Tahirim-bakoky ny firenena ho an'’ny Tantara an-tsary foronina [: http://www.citebd.org/
 Matt Alt ao amin'ny AltJapan: http://altjapan.typepad.com/my_weblog/2009/06/anime-ga-itai.html
 Hiroshi Odagiri avy ao Wired Vision: http://wiredvision.jp/blog/odagiri/200906/200906231300.html
 antsom-bahoaka momba ny hevitry ny masoivohon’ny raharaha ara-kolontsaina: http://www.bunka.go.jp/oshirase_other/2009/mediageijutsu_iken_boshu.html
 Ilay mpitoraka blaogy mojix: http://mojix.org/2009/06/07/manga_dendou